Vaovao - manampy foibe famolavolana masinina roa fanampiny izahay!
Manampy ivon-toerana masinina roa fanampiny izahay!
Rehefa mihabe isan-taona ny kaomandy isan-taona, tsy afaka mamaly ny filan'ny mpanjifanay ny fahafahanay milina voalohany. Noho izany, nanolotra milina fanodinana herinaratra roa izahay. Ireto masinina roa ireto dia namboarina manokana ho an'ny vokarinay. Izy ireo dia tarihin'akanjo, tsy toy ny fehikibo mahazatra, manana hery matanjaka kokoa izy ireo mba hananany fahombiazana tsara lavitra.
Ireo fiasa an'ity milina ity:
1. Ny fandriana dia mandray rafitra fitarihan-torolàlana mahitsizoro indroa, ambonin'olom-piraikitra lehibe, fitoniana tena tsara.
2. Ny casting rehetra dia arotsaka in-droa ary arotsaka tsara aorian'ny famonoana azy. Ny lalamby mpitari-dalana dia manana fanoherana tsara hitafy sy fitazonana marina.
3. Ny lalamby mpitari-dalana amin'ny tsanganana dia rafitra fitarihan-torolàlana mahitsizoro indroa lehibe, ary fohy kokoa ny halaviran'ny fanohanana.
Inona no atao hoe milina fanodinana herinaratra?
Ny milina fikosoham-bary matanjaka dia an'ny karazana fitaovana milina be mpampiasa amin'ny milina fikosoham-bary. Izy io dia karazana fitaovana milina fanapahana vy mahery. Ny fitaovan'ny milina dia henjana mafy, fanovana hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha ary mahazaka puce mavesatra mavesatra. Lozam-pamokarana milina fanodinana herinaratra (lavaka fikosoham-baravarankely) azo mivantana na amin'ny alàlan'ny kojakoja hametrahana karazana fanapahana varingarina isan-karazany, fanapahana fikosehana kapila, fananganana fikosoham-bary, fanapahana fikosoham-bary, sns., Mety amin'ny fanodinana karazana rehetra ny ampahany amin'ny fiaramanidina, ny tehezan-tendrombohitra, ny lalan-kely, ny lavaka, sns., no fitaovana fanodinana tsara indrindra ho an'ny famokarana milina, bobongolo, fitaovana, metatra, fiara, moto ary indostria hafa.
Ny milina fanodinana herinaratra dia manondro ny fitaovan'ny milina handroahana ny workpiece na ny axis fihodinan'ny fitaovana. Matetika izy io dia misy spindle, bearing ary faritra fandefasana (gear na pulley). Ao amin'ny masinina, izy io dia ampiasaina matetika hanohanana ireo faritra ampitaina, toy ny fitaovana sy pulley, mba hamindrana ny fihetsiketsehana sy ny tselika. Ny fahamendrehan'ny kinematika sy ny hamafin'ny firafitry ny singa ampela an'ny milina fanodinana mahery dia zava-dehibe hamantarana ny kalitaon'ny milina sy ny fahombiazan'ny fanapahana. Ny index lehibe indrindra handrefesana ny fahombiazan'ny singa spindle dia ny fihodinan'ny fihodinana, ny fahamendrehana ary ny fahaiza-miaina haingana.